ch 2 uphawu – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMarko / ch 2 uphawu
2:1 Ke kaloku, emva kweentsuku ezithile, Wabuya wangena eKapernahum.
2:2 Kwaye kwavakala ukuba endlwini. Kwaye abaninzi bahlanganisana ukuba akukho ndawo, nakule mimandla isemnyango. Wayelithetha kubo ilizwi.
2:3 Bafika kuye, abafaka ofe, ngubani ethwelwe ngabané.
2:4 Kwaye xa azaba nako ukuba bammise phambi kuye ngenxa yesihlwele, banqika entungo apho abekhona. Kwaye ukuyivula, bazifinyeza phantsi lokukhwelisa apho wayelele kofe.
2:5 ke, xa uYesu wabona ukholo lwabo, wathi kofe umzimba, "Unyana, izono zakho zixolelwe. "
2:6 Ke abathile apho ababhali abathile behleli kuloo ndawo nokucinga ezintliziyweni zabo:
2:7 "Kutheni lo mntu ethetha ngolu hlobo? Yena uyanyelisa. Ngubani na onako ukuxolela izono, kodwa uThixo yedwa?"
2:8 Kanye, uJesu, eqonda ngomoya wakhe ukuba babecinga le ngaphakathi kwabo, wathi kubo: "Kutheni na ezi zinto ucinga ezintliziyweni zenu?
2:9 Okukona kulula, wathi kofe umzimba, 'Izono zakho zixolelwe,'Okanye athi, 'Vuka, athabathe lokukhwelisa lwakho, uhambe?'
2:10 Kodwa ukuze nazi ukuba unalo igunya uNyana woMntu emhlabeni lokuxolela izono,"Wathi kofe umzimba:
2:11 "Ndithi kuwe: Vuka, athabathe lokukhwelisa lwakho, uye endlwini yakho. "
2:12 Kwaoko wavuka, wawaphakamisa up lokukhwelisa yakhe, wemka phambi kwabo bonke, ukuze bonke babezibuza. Kwaye yayizukisa uThixo, ngokuthi, "Siye awukaze ubone into enjengale."
2:13 Wabuya wemka, waya elwandle. Kwaye ke indimbane yonke beza kuye, yaye wabafundisa.
2:14 Ke kaloku njengoko wayedlula, wabona uLevi ka-Alifeyu, ehleli kwiofisi. Wathi yena kuye, "Ndilandele." Esukile, , wamlandela.
2:15 Kwathi ukuba, akubon 'ukuba uhleli ngasesithebeni endlwini yakhe, eninzi yababuthi berhafu naboni, behleli phantsi ndawonye noYesu nabafundi bakhe. Kuba abo bamlandela babebaninzi.
2:16 Baye ke bemlalele ababhali nabaFarisi, ebona ukuba wadla ndawonye nababuthi berhafu naboni, wathi kubafundi bakhe,, "Kungani na ukuba umfundisi wenu adle nisele kunye nabaqokeleli-rhafu naboni?"
2:17 uJesu, bathe bakuliva elo, wathi kubo: "Enempilo Akufuneki gqirha, kodwa abo izifo ukwenza. Kuba andize kubiza nje, kodwa aboni. "
2:18 Kwaye ke abafundi bakaYohane, nabaFarisi, ukutya. Zafika bathi kuye, "Kutheni na ukuba abafundi bakaYohane * bakaYohane bazile, kodwa abafundi bakho benza ukudla?"
2:19 Wathi kubo uYesu: "Njani oonyana umtshato ukutya lo gama umyeni nangoku nabo? Ebudeni naliphi na ixesha asephakathi kwabo umyeni nabo, bona abakwazi ukuba uzilile.
2:20 Ke imihla kuya kufika ixesha lokuba umyeni asuswe kubo, bandule ke ukuzila, ngaloo mihla.
2:21 Kaloku akukho mntu uthungela isiziba somchako omtsha phezu engutyeni endala. kungenjalo, kongezwe entsha siyakrazula endala, yaye ukukrazuka kuba kubi ngakumbi.
2:22 Kanjalo akukho utha iwayini entsha kwiintsuba zewayini ezindala. kungenjalo, iwayini leyo yobila, izigqabhuze iimvaba, iwayini uthulule, neentsuba zewayini ziya kulahleka. kunokuba, iwayini entsha imele ifakwe kwiintsuba zewayini ezintsha. "
2:23 kwaye kwakhona, ngoxa iNkosi ehamba ingqolowa ivuthiwe ngeSabatha, abafundi bakhe, njengoko phambili, baqalisa ukwahlula ezindlebeni yembewu.
2:24 Kodwa wathi kuye abaFarisi, "Khangela, kutheni na ukuba nenze oko kungavumelekileyo ngesabatha?"
2:25 Wathi ke yena kubo: "Anizange nifunde na into awayenzayo uDavide, oko wayeswele, elambile nokulamba, yena kunye nabo babekunye naye?
2:26 Okokuba wangena endlwini kaThixo, phantsi umbingeleli omkhulu Abhiyatare, wadla isonka esinikelwa, ekube kungavumelekile ukuba zidliwe bantu, bantu, ingengabo ababingeleli, nendlela wayinika abo babekunye naye?"
2:27 Wathi ke yena kubo: "UMhla woPhumlo lo wabakho ngenxa yomntu, asingumntu owabakhoyo ngenxa yesabatha.
2:28 Kwaye, uNyana woMntu uyiNkosi, yawo noMhla woPhumlo. "